Madaxweyne Xasan Sheekh “Colaada Gaalkacyo Qarni ka badan ayay jirtaa, shalay iyo maanta ma dhalan” – STAR FM SOMALIA
Wareysi uu Madaxweynuhu siiyay Telefishinka Universal ayuu ku sheegay in aanay wax door ah ku laheyn dowladda dagaalka Gaalkacyo, isagoo tilmaamay in horay uga codsadeen labada dhinac in dagaalka la joojiyo.
“Meel ay dowladda colaad ku hurisay ma irto, wax door ahna kuma lahan, cid ay qalbi kala jirto dowladda Soomaaliya ma jirto, dhowr jeer ayaa ka codsanay in dagaalka la joojiyo, waxaa ka shaqeynay heshiiskii December oo Beesha Caalamka goob joog ka aheyd”ayuu yiri Madaxweynaha.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dib u soo cusboonaado colaada Gaalkacyo ay sabab u tahay dib u dhac ku yimid dhaqan gelinta heshiiskii December.
“In Colaada Gaalkacyo dib u soo cusboonaato waxaa sabab u ah dhaqan gelintii heshiiskii December oo dib u dhac ku yimid, dib u dhiciisa ayaa keentay in colaada dib u soo laabato”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa sheegay in colaada Gaalkacyo ay jirto qarni ka badan, isla markaana aanay aheyn dagaal maanta ama shalay soo bilowday, isagoo soo hadal qaaday heshiisyadii ay horay u gaareen Madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/llaahu Yuusuf Axmed iyo Jen, Ceydiid ee lagu dhameynayay colaada Gaalkacyo.
Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday heshiiskii 1960-kii ee Imaad Cumar hoggaaminayay, isagoo mar kale sheegay in muhiim tahay in la xaliyo waxyaabaha ay kala tabanayaan labada dhinac, isla markaana uu waajib ka saaran yahay dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Maamulka Puntland ayaa sheegay in dagaal siyaasadeysan oo diimeysan lagu soo qaaday, isla markaana ujeedka yahay in lagu boobo dhulkooda, iyadoo ku eedeeyay dowladda Federaalka inay qeyb ka tahay dagaalka.
Heshiisyo ay dhowaan sheegtay dowladda Itoobiya in laga gaaray dagaalka Gaalkacyo ayaa shaqeyn waayay, sidoo kale heshiis ay ka soo shaqeysay Imaaraadka carabta oo ay kala dhex dhigtay Madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland ayaa dhaqan geli waayay.
Guddiga Doorashooyinka oo saddex cisho u qabtay in lagu soo gaba gabeeyo diyaargarowga Doorashada Aqalka Hoose